Sida Loo Maalgashado Bilowga Farsamada Oo Faa'iido Weyn Loo Helo | Tilmaamaha Buuxa ee 2021
Bogga ugu weyn Sida Loo Maalgashado Bilowga Farsamada Oo Faa'iido Weyn Loo Helo | Tilmaamaha Buuxa ee 2022
Sida Loo Maalgashado Bilowga Farsamada Oo Faa'iido Weyn Loo Helo | Tilmaamaha Buuxa ee 2022
Maal -galiyaha caanka ah ee Warren Buffet ayaa yiri, “Waligaa ha ku maalgelin ganacsi aadan fahmi karin.” Fahamka sida loo maalgashado bilowga teknolojiyada waxay noqon kartaa wax lagu qoslo, xiiso leh, murugo leh, oo lagu abaal mariyo sababo ka badan inta maqaalkani ka koobnaan karo.
Waa sababtaas awgeed Warren Buffet in kasta oo uu ku guulaystay ganacsade iyo maal -gashade, haddana wuxuu inta badan ka fogaaday qaybta farsamada.
Ogaanshaha iyo fahamku waa laba shay oo gabi ahaanba kala duwan oo ay tahay in maalgeliye damacsan inuu ogaado.
Hal shay waa inay caddaataa dhammaadka akhrinta maqaalkan waana sida loo maalgashado bilowga teknolojiyadda oo macaash weyn loo sameeyo. Waxaa jira dhowr siyaabood.
Maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad fahanto aqoonta maalgelinta bilowga teknolojiyadda wuxuuna kaa caawinayaa inaad adigu ku biiriso qiimeynta isku-dhufashada bilowga marka aad diyaar u tahay.
Hordhac - Aasaaska
Nooca lacagta ee ku dabaalanaya bilowga tiknoolajiyadda guuleysta sida Instagram, LinkedIn, iyo waxyaabaha la midka ah ayaa dad badan ka yaabiya.
Maxay markii hore fikirka uga fikiri waayeen ama xataa ay u maalgalin waayeen, haddaanay ahayn wax kale laakiin soo noqoshada?
Tirooyin isku mid ah, oo balaayiin ah, ayaa ilmo farxad leh ka ilmeysiiya abuurayaasha iyo maalgashadayaasha shirkadahan.
Tani maahan in laga hadlo qiimaha hadda jira ee 1 bitcoin, maadaama sheekada bitcoin ay tahay mid ka qoomameyneysa dad badan.
Kuwii inkasta oo ay ka soo horjeedaan ay jeclaan lahaayeen in ay geliyaan qayb ka mid ah dakhligooda la tuuro.
Bilowga teknolojiyadu way yimaadaan oo tagaan, laakiin waxa isku sii jirayaa waa caro -xumada guusha, habka, iyo fudaydka ay la yimaadaan.
Laga soo bilaabo daaqadaha Bill Gates ilaa macruufka Steve Jobs ilaa PayPal iyo SpaceX ee Elon Musk, hadda waxaa jira ku dhawaad ​​tiro aan la tirin karin oo ah bilawga teknolojiyada oo isku dayaya inay wax u qabtaan qof kasta oo ka fikiraya arrintaas waa wax lagu farxo.
Tiradaasi waa ta aad ka faa'iidaysanayso. Nin ayaa ka hadlay waqti ka hor sidii uu joogay Paris markii Uber la alifay, wuxuu ahaa 79 jirth isticmaale barta Instagram, wuxuu lahaa raacitaankii ugu horreeyay ee Tesla, Siri waxaa laga bilaabay gurigiisa, wuxuuna iibiyey kaydka tufaaxa $ .75.
Bal qiyaas inaad marin u heli karto dhammaan shirkadahaan marka aad dhasho. Waa shaygii riyooyinka. Maalgelinta bilowga farsamada waxay ku jirtaa wareegyo waana wax aad u baahan tahay inaad qorsheysato, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay. Tani waa sababta maqaallada ku tusaya “sida loo sameeyo” loo qoro.
Waa kuma malaa'ig maalgashade?
Adiga oo ah qof wax akhriyay ilaa heerkan, waxaan u malaynayaa inay aad kuugu fududahay waqtigan inaad u sheegto malaa'ig ku jirta macnaha guud inay ka duwan tahay tan meelaha kitaabiga ah.
XIDHIIDHKA: Qeexitaanka Maareynta Ganacsiga: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Malaa'igta maalgelisa erayada, waa dad, inta badan shakhsiyaad qiimahoodu sareeyo oo maalkiisa ama lacagteeda geliya shirkad ganacsi.
Tan waxaa badanaa loo sameeyaa si loo siiyo taageero maaliyadeed shirkadda si ay u noolaato oo u guulaysato badanaana beddelkeeda u lahaanshaha sinnaanta ee bilowga farsamada. Maalgashadayaasha malaa'igta mararka qaarkood waa xubno qoys, saaxiibbo, iyo dhinacyada danaynaya.
Haddii aad haysato lacag, aad xiisaynayso isugeynta qiimaha, oo ha ka fikirin inaad ku soo noqoto lacagtaada muddo, markaa waa inaad si walba u noqotaa maal -geliye malaa'ig.
Baro wax ku saabsan 21 Siyaabood Oo Lacag Looga Sameeyo New York (NYC) | Talooyin Aan La Faafin
Sida loo helo bilow-maal-gashi
Kahor intaadan horay u gelin oo aad maalgelin ku bilowdo teknolojiyadda, waxaad u baahan tahay in laguu sameeyo fahamka iyo laga yaabee inaad ku raaxaysato aqoonta laga yaabo inaadan mar dambe soo helin lacagtaada.
Waxaa laga yaabaa inaad "quusto" xoogaa lacag ah oo u muuqda bilow-tiknoolajiyadeed oo faa'ido laga filayo mana arki doontid lacagtaada mar kale.
Taasi waxay tidhi, waxaan u degi doonnaa raadinta farsamooyinkan bilowga ah. Bilowga farsamadu meel walba waa yaalaan. Tirakoobku wuxuu leeyahay tirada bilowga ah ee la abuuro sannad kasta adduunka oo dhan in ka badan 100 milyan.
Taas macnaheedu waa inay aad u badan yihiin. Arrintu waa sida loo helo kuwa duuli doona. Waa inaad dhegeysataa oo aad adigu wax u aragtaa.
#1 - Meelaha Tooska ah
Ganacsatada tiknoolajiyadu waxay fikradahooda u dhiibi karaan maalgashadayaasha malaa'igta. Qaar ka mid ah ganacsatada tiknoolajiyadda ah ayaa ka qaybgalaya shir -weyne halkaas oo tiro aad u badan oo saamayn leh ay joogi doonaan ka dibna la kulmaan si gooni -gooni ah kalfadhiyada ka dib oo ay ula dhaqmaan.
Qaar ka mid ah ganacsatada tiknoolajiyadda ayaa kaliya qabta dood miiska waxayna ka hadlaan fikradahooda halkaas ayayna ka dhaqaaqdaa.
#2 - Soo koobitaan
Waxaa jira shirar tiknoolajiyadeed sida Hawl-wadeenada halkaas oo teknolojiyadda iyo maskaxda sare ee ganacsigu ay isugu yimaadaan oo ka hadlaan arrimaha.
Soo-koobitaanno sidaas oo kale ah ayaa ah kulanno aad u wanaagsan sidii maalgashade ama aasaasaha aasaaska farsamada. Hal -abuurayaasha, hormuudka, iyo dadka xiiseeya had iyo jeer way joogaan.
#3 - Meelaha maalgashadayaasha.
Istuudiyadaha sida 1000 Malaa'igta iyo qaar kaleba waxay awood u siiyaan maalgashadayaasha inay ka soo qeybgalaan munaasabado gaar ah halkaas oo ay kula xiriiraan bilowga lacag-bixin xubinnimo sannadle ah.
Halkii aad ka tanaasuli lahayd boqolleyda kore sida aad uga heli lahayd maal -gashiyada dhaqameedyada ama ururrada. Madalkan ayaa laga yaabaa inuu kordhiyo soo-gaadhista wareegyada lacag ururinta ee bilowga ah.
XIDHIIDHKA: Bangiyada Maalgashiga ee ugu Fiican Australia 2022 | Heerarka, Debaajiga ugu Yar
#4 - Dadban macnaheedu waa
Waxaa laga yaabaa inaad bilowdo bilow farsamo oo u baahan maalgelin kadibna ka soo qaado halkaas.
Mararka qaarkood, waxay noqon kartaa uun saaxiibbadaa oo ka hadlaya farsamo cusub oo ay adeegsadaan oo iyaga u shaqaysa. Haddii aad degdeg ku filan tahay, waxaad hubtaa inaad si habboon u isticmaasho macluumaadkaas.
#5 - Cilmi baaris
Dadka qaar ayaa naftooda u qaatay inay macluumaadka ku saabsan bilowga teknolojiyada u soo saaraan dunida dibedda oo laga yaabo inaysan garanayn waxa ka socda gudaha. Blogyada iyo wargeysyada taas sameeya waxay noqon karaan ilo weyn.
Adiga ayaa sidoo kale samayn kara baaritaanka. Ka bilow waxa aad jeceshahay. Tag Google oo weydii su'aal sida "teknolojiyad cusub ayaa iga caawisa inaan sameeyo X?" ama "waa maxay app -ka cusub ee iga caawiya inaan gaaro Y?"
Taas samee oo ka fuula halkaas. Ka fiican tartiib tartiib ah. Horta aqoontaada kobci.
Waa maxay maalgelinta abuurka?
Maalgelinta abuurka ayaa lacag ka ururinaysa maalgashadayaasha malaa'igta. Maalgelinta abuurka waa lacag kasta oo ay ururiso shirkad aan ahayn habkii caadiga ahaa laakiin adag ee lacag ururinta.
Ka dib markii maalgelinta abuurku timaaddo Maalgelinta Taxanaha A, B, iyo C.
Sida loo maalgaliyo bilowga farsamada
#1 - Si nabad ah u ciyaar
Magacan kan, waa geedi socod aad diido inaad si buuxda ugu gasho xaddiyo badan bilow kasta oo tiknoolaji ah.
In kasta oo ay tani u ekaan karto fikrad fiican, haddana waa mid badbaado leh oo macaashkaaga ka tagaysa (haddii shirkaddu koraan ama go'aansato inay ka baxdo) la qasi karo. In kasta oo micnaheedu yahay inaad wax hesho, waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad ka yar tahay intii aad heli lahayd.
Si aad u maalgashato sidan oo kale, haddii aadan ku dhaqaaqi karin maalgelinta gacanta, waxaa jira habab kale oo aan la xiriirin oo ah maalgelinta.
#2 - Gal dhammaan
Middan oo kale sida dhawaaqyada magacu waxay ku lug leedahay hagaajinta xoogaa lacag ah oo ku jira bilowga tiknoolajiyadda iyo gorgortanka qaar ka mid ah qiimaha sinnaanta ee lacagtaada. Haddii ay si fiican u shaqeyso, haddii aysan sidaas yeelin, sidoo kale.
In kasta oo ay tani u ekaan karto mid fantastik ah maadaama abaalmarintu ay noqon karto dakhli la taaban karo ama aan waxba ahayn, waxay u baahan tahay taxaddar habboon iyo weydiinta su'aalaha saxda ah ee ku saabsan halka ay lacagtaadu ku socoto.
Buugga Zero to One waxaa lagu xusuusinayaa sida Andreessen Horowitz uu $ 250k u geliyay Instagram. Laba sano ka dib waxaa lagu iibsaday $ 1B Facebook, iyada oo lagu soo celiyay 312x, ama $ 78M $ 250k bilowga ah.
#3 - Adigu bilow mid
Hab kale oo lagu maal-gashado bilawga teknolojiyadda oo laga yaabo inay u muuqato wax lagu qoslo waa inaad adigu bilowdo mid. Waa hab toos ah oo ku saabsan.
XIDHIIDHKA: 20ka Siyaabood ee Ugu Raqiisan Naftaada Maal Geli 2022 | Talada Khabiirka
Waxaad aqoonsataa dhibaato ay farsamadu xallin karto, waxaad fikradda u keenaysaa dhowr ganacsade oo kale ah adiga oo kale haddii aad doorato.
Iyada oo waddo la taaban karo leh oo ku xeeran fikradda, waxaad uruurineysaa koox kaa caawin doonta inaad dhisto oo aad bilowdo dhisme.
Waxa ku saabsan bilowga farsamada ayaa ah inaad xasuusato inaad ku jirto muddada dheer iyo inay qaadan doonto qayb weyn oo waqtigaaga ah. Tani waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa in lala kaashado ganacsato kuwaas oo iyaguna gacan ka geysanaya sidii fikraddan loo miro dhalin lahaa.
#4 - Ku maalgalinta aaladaha dadku ku badan yihiin
Goobaha crowdfunding sida SeedInvest iyo MicroVentures sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagu maalgashado.
SeedInvest waa madal dadweyne fara badan oo u oggolaanaysa shaqsiyaadka inay maalgashadaan shirkado heer-hore ah oo horay loo baaray si ay u suurta gasho.
Sida laga soo xigtay SeedInvest, wax ka yar 1% shirkadaha raadinaya maalgelinta madal ayaa la aqbalaa. Markaad iska diiwaangeliso koontada SeedInvest, waxaa laguu soo bandhigayaa liiska shirkadaha lacag -doonka ah.
Shirkado badan ayaa u furan inay ka helaan maalgashi qof walba, laakiin qaarkood waxay u baahan yihiin maalgelin ballaaran waxayna u furan yihiin oo keliya maalgashadayaasha la aqoonsan yahay oo dakhligoodu ka badan yahay $ 200,000 labadii sano ee la soo dhaafay.
Waxaa jira aalado kale oo awood kuu siinaya inaad si isku mid ah u maalgashato.
#5 - U fiirso sharkiga oo ku celi dhaqdhaqaaqooda
Qof baa yiri hadaad rabto inaad kasbato sida wiilasha waaweyn, waxaad fiirsataa waxay wiilasha waaweyni sameeyaan adiguna sidaas oo kale ayaad samaysaa.
Maadaama qof walba uu leeyahay sababaha uu u maalgashan karo, wuxuu ku baaqayaa baaritaan ku habboon oo dhinacaaga ah iyo haddii ay la socoto qiyamkaaga, markaa adiguna sidoo kale waad maalgashanaysaa.
Warren Buffet oo ah shark maalgashi ayaa sheegaya in inta aad rabto inaad raacdo meel kasta oo uu maalgashado, “marnaba ha ku maalgelin ganacsi aadan fahmi karin.”
Kahor intaadan bilaabin maalgashiga bilowga teknolojiyada marxaladda hore, waxaa muhiim ah in la fahmo in bilowyo badan oo tiknoolajiyadu ay guuldareystaan ​​oo ay maal-gashadayaasha ka tagaan waxba. Waa dadaal aad u sarreeya, oo ah abaalmarin aad u sarreeya.
Waa inaad sidoo kale ogaataa in, si ka duwan saamiyada, aadan ka ganacsan karin maalgashigaaga bilawga ilaa ay go'aansadaan inay tagaan dadweynaha. Waxaa lagaa filayaa inaad xajisato ilaa inta suurtogalka ah.
15 Fursado Ganacsi oo ku saleysan guriga oo aan lahayn kharash bilow ah 2022
Waxaan hayaa fikrad alifay laakiin ma haysto lacag aan ku maalgeliyo 2022 | Maxaa xiga?
Sida Looga Guuro Guriga Waalidkaaga 2022 | Tallaabooyin Wax -ku -ool ah oo Fudud
21 Hustle Side Bixinta Badan ee Loo -shaqeeyaha Korontada
5 Caymiska Safarka Ardayga ee ugu Fiican: Waxa uu Daboolayo iyo Sababta aan ugu Baahanahay.
Sidee Craigslist -ku Lacag Badan ku Helaa | 2022 Faahfaahin Buuxda
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay sida Craigslist uu ugu wareego dariiqa ay ku heli karaan biilasha iyagoo tixgelinaya xaqiiqda…
Sababaha Loo Adeegsado Istaraatiijiyad Maalgalineed oo Degenaansho Yar
Waqtiyada aan la hubin, maalgashadayaasha doonaya qatar yar inta ay ilaalinayaan raasumaalkooda waxay raadin karaan maalgashiyo leh isbeddel hoose.…
GE ma tahay kayd wanaagsan oo la iibsado?
Sida inteena badan, waxaad u malaysay inaad wax ka iibsatid shirkad qiimaheedu cirka isku shareeri doono...
Maxay Lacag La'aanta Royalty U Tahay Meheraddaada Sida saxda ah?
Dadku way jahawareeraan marka ereyga royalty-ga la sheego, waxaa laga yaabaa inaad is waydiiso waxaad u baahan tahay…
Bangiyada ugu Wanaagsan Massachusetts 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
La shaqaynta bangiga saxda ah waxay kaa caawin kartaa hagaajinta yoolalkaaga dhaqaale waxayna ku siin kartaa xasilooni maskaxeed. Haddaba,…
Sida Loo Helo Shatiga Ganacsiga ee Michigan iyo Ogolaanshaha | 2022
Milkiile ganacsi ahaan, waxaa laga yaabaa inaad timi shuruudahan. Leeyahay qorshayaal iyo yoolal badan oo…